ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တာမွေ ရှိ ရောင်းရန် Sateta Thukha Street (စိတ္တသုခလမ်း), တိုက်ခန်း | ShweProperty.com
ရောင်းရန် - တိုက်ခန်း - Sateta Thukha Street (စိတ္တသုခလမ်း)
*Location – Sateta Thukha Street, Tamwe Township.
*Price – 450 Lakhs
*Area — 715 sqft
*Rooms formation — 2-Normal Bedrooms, 1-Air Con, Living room and Kitchen.
Property ID: S-1189961
အိမ်ခြံမြေ အမည် : Sateta Thukha Street (စိတ္တသုခလမ်း)
Shweproperty ID: S-1189961